Isilinda esihlanganisiwe YAQ2
Isilinda esincanyana yingxenye yensimbi eyindilinga lapho i-piston iqondiswa khona ukuphindisela kulayini oqondile. Isisebenzisi esisebenzayo siguqula amandla okushisa abe amandla kagesi ngokwandisa ku-cylinder yenjini; Igesi ithola ukucindezelwa kwe-piston kusilinda se-compressor futhi inyuse ingcindezi. Izindlu ze-turbine, i-rotary piston engine, njll., Ibizwa nangokuthi isilinda.
Isilinda ezacile, enesakhiwo esihlangene, isisindo esincane, isikhala esincane nezinye izinzuzo.
Ovundlile ukuvimba isilinda
Isetshenziselwa ukumisa i-pallet kulayini wokukhiqiza, ngakho-ke ibizwa nangokuthi i-stop cylinder, ngenxa yokushaywa kwayo okusebenzayo, ngakho-ke kukhona nezinkampani ezibizwa nge-fixed-range rod cylinder.
Umkhawulo wamanje YAS
Umkhawulo wamanje ungowensimu yezakhi zikagesi, iyithuluzi elikhethekile elisetshenziselwa ukukhawulela okwamanje, isici salo ukuthi linengqikithi ejwayelekile yendandatho, ingumongo wendlela i-core ejija ngayo ithusi eyinhloko yenjoloba embozwe ngocingo, ingumgogodla wethusi Kwibanga lesikhawu le-inthanethi lamapulasitiki amaningi le-multicore ngokulandelana kusetha isikhombimsebenzisi sokuphakelwa kwamandla, isikhombimsebenzisi esijwayelekile sokuphakelwa kwamandla kagesi kanye ne-interface yokuphakelwa kwamandla kagesi.
Amafutha sesikhashana YRB
Umsebenzi we-oil pressure buffer ukunciphisa ukudlidlizela nomsindo ekusebenzeni okuzenzakalelayo, ukuguqula amandla e-kinetic akhiqizwa yinto ehambayo abe ngamandla okushisa bese uyidedela emoyeni, futhi umise kahle into ngokuhamba.
Isetshenziselwa ukuhambisa uwoyela kadizili, uphalafini, amanzi neminye imithombo yezindaba.
Gqoka ukumelana, irediyamu encane yokugoba, isisindo esincane, ukuqina okuhle, ukumelana nokuguga, okusebenzayo
Uhlobo lwentonga oluyi-hydraulic cylinder lungenye yezinhlobo ze-hydraulic cylinder, yi-DU eyinhloko yokwenza izingqinamba ze-hydraulic cylinder.
Okubizwa ngokuthi yi-super thin thin hydraulic cylinder kungashiwo nokuthi kungu-jack omncane kakhulu, njengoba igama liphakamisa ukuthi liphansi kunobukhulu obujwayelekile be-hydraulic cylinder isihlobo, nesisindo esincane, i-tonnage enkulu, izici eziguquguqukayo zeselula. indawo yokubhaka yenza ukumelana nokugqwala kuqine.